Nzira neHokuvakirwa Mari Mari - Central Language School, Cambridge
Nzira neIndaneti Mafiro
Chipo Chakakosha - 20% inobvisa pese pese mari yechikoro yemabhukiro akaitwa pamberi pa1 Kurume 2021
Mari yakajairwa yechikoro:
Intensive English GBP 260 pavhiki 20% dhisikaundi = GBP 208 pavhiki 21 maawa mashoma purogiramu kwevhiki uye mamwe mabasa evanhu / tsika. Inosanganisira kuongorora kugadzirira.
General English GBP 205 pavhiki 20% dhisikaundi = GBP 164 pavhiki 15 maawa mashoma purogiramu kwevhiki pamwe nemagariro evanhu / zvemagariro 4-5 afternoons.
Afternoon Course GBP 80 pavhiki 20% dhisikaundi = GBP 64 pavhiki 6 maawa masikati chidzidzo pamusi weChipiri, Chitatu neChina masikati. Inosanganisira kuongorora kugadzirira.
Zvimwe zvinodzikisirwa zviripo zvekunyoresa kwenguva yakareba paInternet, General & Masikati Makosi:
4-9 vhiki 5% discount
10-15 vhiki 10% discount
16-23 vhiki 15% discount
Mavhiki e24 kana kupfuura 20% discount
Zvidzidzo-zve-izvo-zvoga: GBP 55 paawa-zvakaderedzwa zvinotaurika
Mari yako yebhadharo inosanganisira:
Free wif-fi muChikoro
Certificate uye mushumo wezvikoro zvenguva yakazara
Ongororo yekugadzirira kana zvichidiwa
Mabasa akawanda emagariro uye tsika
Mari yako yebhadharo haisanganisi:
Mabhuku echiGraam uye mabhuku ekuongorora maitiro
Personal and travel inshuwarisi
Kufamba nekubva Chikoro nebhazi kana bhasikoro
2020 / 2021 mitengo yekugara:
Half Board vashandi vomunharaunda GBP 170 pavhiki
Bed and breakfast homestay GBP 140 pavhiki
Self Catering vagari vomunharaunda GBP 130 pavhiki
Hapana mari yekubhadharisa pekugara ichabhadharwa kuitira mabhaisheni akaitwa na1 Kurume 2021
Mari yekupinda haina kuiswa mubhadharo yebhazi. Iwe unofanirwa kuverenga Cambridge miedzo pamusoro pemwedzi ye2 isati yasvika zuva rekuongorora.
Kuongorora Mazuva uye Mafisi e2020
Mazuva Okuongorora Kuda Mari
PET 6 nguva nenguva GBP 95
FCE 6 nguva nenguva GBP 151
CAE 9 nguva nenguva GBP 157
CPE 4 nguva nenguva GBP 164
IELTS Kazhinji GBP 185
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota shanya www.cambridgeopencentre.org uye https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
Isu tinokukurudzira kuti uronge inishuwarenzi yekuvhara kurapwa, kurasikirwa kwezvinhu zvako pachako uye kurasikirwa nemari, kana uchifanira kukanzura kosi yako.
Mushure mekunge iwe wabhadharira chikoro chako uye hafu-bhodhi fizi dzimba dzekugara, iwe uchafanirwa kubhadhara kwemasikati ezuva rekunze, sarudzo dzekuenda, mamwe masarudzo masikati mabasa, kuenda nekudzoka kunhandare yendege, bhazi, kana bhasikoro kubhadhara kuCambridge. Unogona kushandisa mabhuku echikoro panguva yekosi, asi isu tinokurudzira kuti iwewo utenge bhuku rekutaura girama iwe uripano. Isu tinokuraira iwe kuti uunze inokwana £ 50 pasvondo.
Kana iwe unyoresa kwevhiki kana pane Public Holiday iwe uchawana purogiramu yevhiki iyoyo. Iko hakuna makirasi mumazuva anotevera mu2021:
Chikoro chinovhara zororo reKisimusi mushure me18 Zvita 2020 uye makirasi anotanga zvakare kubva Chipiri 5 Ndira 2021.
Chishanu 2 April - Good Friday
Muvhuro 5 April - Easter Muvhuro
Muvhuro 3 Chivabvu - Chivabvu Zuva
Muvhuro 31 May - Zuva reSweden Bank
Muvhuro 30 August - Zuva reKusika Bhizha
Kana iwe ukasarudza kutora zororo munguva yako yako, ndapota tibvunze mberi. Kana iwe uri muzororo kwevhiki vhuvhuro-Chishanu, hatisi kuzobhadhara chikoro chemari yevhiki iyoyo. Kana iwe uri kure nemusha wako, unogona kubhadhara mari yakazara kana chikamu kuitira kuti uchengete imba yako.